Nna-ukwu na Atụmatụ Nhazi nke UNAH - Geofumadas
Nzere masta Master in Land Management and Plan nke National Autonomous University nke Honduras (UNAH) nyere, bụ mmemme agụmakwụkwọ na, kemgbe e mepụtara ya na 2005, esorola ya na Ngalaba Geography nke Mahadum Alcalá (Spain) . N'ihi ajụjụ a bịakwutere anyị ụbọchị ole na ole gara aga, anyị ji ohere ahụ kọọrọ ndị bụ isi gbasara nzere masta a, n'agbanyeghị na mbido afọ 2013, ha mikpuru onwe ha n'usoro nyocha onwe onye na mmelite nke Mmemme Ọmụmụ ihe nke nkwalite ọhụụ ga-amalite n'etiti 2013. Anyị na-atụ anya na ọ nwere ike ije ozi dị ka ntinye maka ụfọdụ mahadum ndị ọzọ na-eme atụmatụ ịnye ọrụ yiri ya.
Usoro a na-akwado site na ngalaba nke gbasara ohere Sciences (ihu / UNAH) na Department of Geography na Mahadum Alcalá (Spain), na ihe nghazi na mahadum ọkachamara na ihe ọmụma na / ma ọ bụ ahụmahụ na-ala management, n'obodo ukwu na n'ime ime obodo atụmatụ, njikwa nke ihe ndi okike, ogba ohia nke n'ókèala, na ojiji nke ihe omuma na ihe oyiyi nke ihe omuma ihe di n'ime.
Onye gụsịrị akwụkwọ na Master's Degree in: Planning Territory Planning and Management, bụ ọkachamara na ọzụzụ pụrụ iche na Basic Space Science and Technology.
Ọ bụ onye ọkachamara nke nwere ike ịrụ ọrụ dịka Onye Nchịkwa, Njikwa ma ọ bụ Onye Nchịkwa nke System Geographic Information System.
Ọ bụ a ọkachamara na-emetụta ya ihe ọmụma nke onwe-nnyocha na proactive ndutịm ọnọdụ, management ala management n'ụzọ na ike chepụta na ịzụlite ukwu atụmatụ, pụrụ iche oru ngo, na isi, cadastral, thematic na zoning obodo ọnụ ọgụgụ map, obodo, mpaghara na mba maka ịhazi mpaghara ahụ.
Ga-enwe ike ịmepụta, jikwaa ma ghọta ọrụ nke dị iche iche ngwá ọrụ geodetic na akụrụngwa kọmputa na ngwanrọ maka nnweta, njikwa, nhazi na nyocha nke data ntụgharị.
Ọ bụ ọkachamara nke nwere àgwà nke ọzụzụ na-aga n'ihu, na-emelite ihe ọmụma ya na nchọpụta ọhụrụ ndị na-ewere ọnọdụ n'ọhịa ya na usoro ọhụụ nke ịchụ, nkọwa na nyochaa data ntụgharị.
Ndị ọkachamara nke Degree Master a ga-aghọta ọrụ nke ichebe ndabere nke data ntụgharị nke a na-edozi ha n'ubi ha.
Mmemme Nna-ukwu na-agụnye isiokwu 19 kesara na usoro 7 na-esonụ:
Ciclo1: Geography and Fundamentals of Territorial Organisation
CTE-501 Geography na atụmatụ mpaghara
CTE-502 Isi nke Ala Management
2 Cycle: Geodesy na Cartography
CTE-512 Photogrammetry na Global Gealing Systems
Map CTE-513: Nzube, Ngwakọta, Nhazi na Mbipụta
CTE-514 Electronic Atlas and Publication of Maps on the Web
3 Cycle: System Information Systems
CTE-521 Ntọala nke Geographic Information Systems
Mmemme CTE-524 na-etinye aka na gburugburu ebe obibi Systems Systems Systems
4 okirikiri: Ime ntanetị
CTE-531 Ụkpụrụ Ahụike nke Ime Ṅweta
CTE-532 Platforms, Sensors and Hyperspectral Remote Sensing
CTE-533 Nkọwa Ngwa nke Images
Ntugharị 5: Nhazi mpaghara
CTE-541 Territory Administration - Ngwa
CTE-542 Atụmatụ Ógbè - Ngwa
CTE-543 Gbasara Mpaghara - Ngwa
6 Cycle: Omume
Usoro CTE-600 nka na-arụ ọrụ na nhazi mpaghara
CTE-700 Research Project (Ụdị).
Ejiri Degree Nna-ukwu na usoro nke Semi, nke gunyere:
· Klas Omume (na-akara): Maka isiokwu ọ bụla ụmụ akwụkwọ na-arụ ọrụ n'ịntanetị, ihe dị ka izu anọ, na nhazi ihu na ụzụ nke ọma (Moodle). Ha na onye nkụzi na-eso ha; onye ọzọ ga-enye amaokwu ndị bi na akwụkwọ.
· KlasN'ihi na onye ọ bụla N'ezie ụmụ akwụkwọ ịga klas ihe na-eje ozi si 8: 00 ka 17: 00 awa, Monday ka Saturday (48 awa ngụkọta).
· Ihe omume bara uru ma na-arụkọ ọrụ: Ma na ihu na ihu na klas mebere, ụmụ akwụkwọ na-azụlite ihe omume. Studentsmụ akwụkwọ nwere edemede maka ọrụ ndị a, yana onyonyo satịlaịtị, foto ikuku na data ndị ọzọ sitere na SIG-FACES / UNAH. Ọzọkwa, ha na-arụ ọrụ na ọrụ na ụfọdụ mpaghara nke Honduras, maka uru nke ọzụzụ nke ha na ndị bi na mpaghara.
Nnyocha: The amụrụ anamde ihe mbụ nnyocha sayensị ekenịmde Prọfesọ Nduzi, onye nzube ya bụ na-eme ka ihe e kere eke na / ma ọ bụ nkọwa nke chọrọ ihe ngwọta na mba na / ma ọ bụ mpaghara nsogbu, na-eduga na nkwadebe, ozize na ihu ọma nke a na tesis nke Degree.
Previous Post«Previous Nzukọ Latin America na Ngwaọrụ Ndị A Pụrụ Iche nke Mkpebi Obodo
Next Post Ihe nhazi 2 nke Cadastre na OAS na-akwaliteNext »
5 na-aza "Onye Nna-ukwu na Atụmatụ Territorial nke UNAH"
Iveth Le Send kwuru, sị:
Abụ m Iveth Levoyer si Ecuador, enwere m mmasị na ogo mmụta na usoro nke ọrụ m Abụ m Onye Nchịkwa Na-ahụ Maka Ala na Territorial Planner gụsịrị akwụkwọ na Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ihe m na-achọ bụ ogo mmụta maka ọrụ m mana n'ịntanetị, ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka Obi ga-adị m ezigbo ụtọ…
Atụmatụ nna ukwu ugbu a chọrọ izu ihu maka klaasị ọ bụla. Ihe dị ka izu ise ọ bụla, ọ dị mkpa ịga klas ahụ site na 8 AM ruo 5 PM site na Mọnde ruo Satọde. Nke a bụ n'ihi na ọtụtụ ndị prọfesọ si mba ọzọ; Gaa ihe ọmụmụ ahụ na mmalite nke klaasị ahụ na mmadụ wee soso n'elu ikpo okwu.
Jorge Alejandro Valle kwuru, sị:
Amaghị m ihe usoro ihe omume ahụ dị. Awa ole ka otu klas kwa ụbọchị?
Ọ na-ewe afọ abụọ. Ugbu a, nkwalite nke anọ amalitela, usoro ọgwụgwọ na usoro ịhọpụta ndị agafe agafe agafe. Ugbu a, ị ga-echere maka nkwalite na-abịa ịmalite, ikekwe na 2016.
julian vallecillo kwuru, sị:
Ogologo oge ole ka nzere nna ukwu ahụ na ọnụ ahịa ya, biko zitere m ozi na email m. M ga-enwe ekele maka ya maka UNAH